विप्लवको यस्तो कारवाहीमा परेका नेकपा नेता पदम राई ओली-प्रचण्डको पार्टीमा प्रवेश गर्दै — Sanchar Kendra
१ओली-नेपाल समूहबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी, काे-को छन् सहभागी ? यी हुन् छलफलका तीन एजेण्डा
२ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता सुरु, अरु को को छन् सहभागी ?
३कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन २०३ जनाको मृत्यु
४ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै
५पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार ५२० जनामा संक्रमण पुष्टि
६ओलीसँग चपलीहाइटमा भएको थियो यस्तो गोप्य सहमति, माधव नेपाल आफैले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
७सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?
८मकवानपुरमा थप १ सय ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पर्सामा पनि बढ्दै
९सपथ लिँदालिँदै जब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्रपतिसामु चिप्लियो यस्तो शब्द, त्यसपछि जे भयो…
१०रुपन्देहीमा थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा संकट झन् बढ्दै
११विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
१२ओलीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, के बिषयमा भयो कुराकानी ?
विप्लवको यस्तो कारवाहीमा परेका नेकपा नेता पदम राई ओली-प्रचण्डको पार्टीमा प्रवेश गर्दै
काठमाडौं । विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट निलम्बित पोलिटब्यूरो सदस्य पदमबहादुर राई ‘विकास’ ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा प्रवेश गर्न लागेका छन् ।
पार्टी नीति र हितविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएपछि महिनादिन अघि बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकले राईलाई निलम्बन गरेर कारवाही गरेको थियो । निक्कै उग्र स्वभावका नेता राई आफ्नो आलोचना गर्ने कार्यकर्तामाथि बैठकमै कुटपिटमा उत्रिनेदेखि गालीगलौज गर्नेसम्मका बिभिन्न पार्टीविपरीत गतिविधिमा संग्लन थिए ।
कमीकमजोरी सच्याउन पार्टीले पटकपटक चेतावनी दिएपनि नमानेपछि उनलाई नेकपाले कारवाही गरेको स्रोतले बतायो । कारवाहीमा परेपछि उनका लागि सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गर्ने बाटो पनि खुकुलो भएको कतिपयको बुझाई छ । उसो त केहिदिन अघि सरकारले बाँडेको संविधानसभा पदबाट विभूषण हुने सूचीमा उनको पनि नाम थियो ।
सत्तारुढ नेकपा प्रवेश गर्ने भएपछि उनलाई उक्त विभूषण प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको पूर्व माओवादी नेताहरुको बुझाई छ । विद्रोही नेकपा उच्च स्रोतले संचारकेन्द्रलाई दिएको जानकारी अनुसार राईलाई निलम्बन गरेर कारवाही गरिएको परिपत्र पार्टीभित्र सबै निकायमा परिपत्र समेत गरिसकेको छ ।
राईले पार्टीको नीतिविपरीत अनधिकृत पात्र र क्रान्तिविरोधी पक्षसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै निलम्बन गरिएको थियो । तर सच्चिने मौका अवधिमा राखिने भन्दै कारवाहीको निर्णय सार्वजनिक नगरिएको स्रोतको बतायो । ‘सच्चिने त परको कुरा, उहाँ त पार्टी नै छोडेर भाग्नु तयारीमा हुनुहुँदो रैछ’ नेकपा स्रोतले भन्यो- ‘पार्टी वैठकमा कार्यकर्तामाथि कुटपिटमा उत्रिने राईजस्तो नेता अहिलेसम्म हामीले देखेको छैन ।’
पछिल्लोसमय नेकपाबाट कारवाही परी गहलत्याइएका नेता कार्यकर्ताहरु प्रचण्ड र केपीको टीका थापेर सत्तारुढ नेकपा प्रवेश गरिरहेका छन् । राईलाइ आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा ओली र प्रचण्डले पार्टी प्रवेश गराउने तयारी गरिएकाेसत्तारिध नेकपा स्रोतले जनाएको छ । ओली सरकारले बिद्रोहीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेदेखि नै राई पार्टीबाट टाढा र गुपचुप बस्दै आएका थिए।
ओली-नेपाल समूहबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी, काे-को छन् सहभागी ? यी हुन् छलफलका तीन एजेण्डा
ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता सुरु, अरु को को छन् सहभागी ?
ओलीसँग चपलीहाइटमा भएको थियो यस्तो गोप्य सहमति, माधव नेपाल आफैले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?
विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
ओलीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, के बिषयमा भयो कुराकानी ?
गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु
ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक